Sidee loo helaa premium Spotify lacag la'aan ah? 99% dadku u isticmaalaan habkan ay mar taas ka akhrisan
Dhammaan adeegyada geeyo music heli karo maanta, Spotify waa mid ka mid ah in uu helo si aad u. Sidaas badan si ay u noqotaa caado Diintiinii marka aad bilaabeyso isticmaalkeeda. Iyo, sababta ma aha inay? Iyadoo malaayiin songs laga heli karaa internetka si ay u sii qulquli, oo maqla, waa in aanay noqon yaab ma laha in buff music aad ku soo dhici doonaan jacayl arrintan mid ka mid ah adeeg geeyo music nooc.
Si kastaba ha ahaatee, wax badan oo dadka isticmaala doonayaan inay noqdaan inay muusikada ku Spotify awood iyo in, sababo cad, ma aha gebi ahaanba suurtagal ah sida heeso aad badbaadin u offline dhagaysto on Spotify kaliya lagu ciyaari karaa iyadoo la isticmaalayo adeega geeyo oo kaliya.
Waxaan u maleeyay in ee aad qaadan qaabab kale ka soo kiiskan. Ka dhig wax akhriska si uu u ogaado sida aad weli soo bixi kartaa music for free on Spotify. c
Qaybta u 1.Is suurto gal ah si aad u hesho lacag la'aan ah Spotify Premium?
Qaybta 2.Download music wax Spotify for free la TunesGo Wondershare
Qaybta 1. suuragal u tahay in aad hesho lacag la'aan ah Spotify Premium?
Haa way tahay. Waxaa jira arrin goobaha yar oo sheegan in la iska siiyo kaararka hadiyadda Spotify lacag la'aan, mana diidi xaqiiqada ah in qaar ka mid ah ay yihiin sharci iyo sidoo kale wax baad ka heli kartaa kaarka hadiyadda ka goobahan oo kuu ogolaaneysaa in aad haysato account premium on Spotify.
Just in aad leedahay si aad uga taxadar leh halka goobaha sida wax looga qabto sida ay suurtagal tahay in la ogaado in ay yihiin kuwo dhab ah ama aan. Sidee waa sidee? Waa hagaag, u bilaabo, inta badan website-yada kuwaas oo lagu yaqaan in ay qaadsiin your computer iyadoo barnaamijyo kala duwan oo xaasidnimo ah sida trojans, adware iyo furin iwm
Sidaas oo ay tahayna, waxaan xishoodo lahaa oo ka fog xaqiiqda ah in ay u qalmaan siiyo isku day ah. Waxaan soo jeedin lahaa oo kaliya in aad is ogow dheeraad ah halka la siiyo macluumaad kasta oo ka soo baxay ku goobahan. Calaamad A Sheeko sheekooyinka goobta xun waa mid ka mid ah oo aad ku helayso sahan in la buuxiyo ka hor bixinta kaarka hadiyadda. Sidaas, ka digtoonaada, iyo amaan.
Halkan waxaa ku qoran dhowr tusaale inkasta oo waxaan ka helay on Google goobaha in ay yihiin bixiya kaarka lacag la'aan ah Spotify hadiyad ah; spotifycoupon.blogspot.com, onlinespotifycode.com iyo spotifyfreeaccount.com iwm
Qaybta 2. Download music wax Spotify for free la TunesGo Wondershare
TunesGo ka Wondershare waa software aad u fiican oo kuu ogolaanaya in aad kala soo bixi ama record Spotify music for free. Waxaa la og yahay in Spotify ma bixin wax fursado ay si fiican u soo bixi heeso kale oo aan ahayn iyaga badbaadiya gudahood ay app u gaar ah.
Wondershare TunesGo kartaan, si kastaba ha ahaatee record music ciyaari Spotify la waayi maayo oo tayo leh, Kuna siiyo in dadka isticmaala ay ka files music diiwaangeliyey in sida ugu fiican ee ka mid ah ay ka ciyaaraan waa. Si aad u soo dejisan ama record music on Spotify la TunesGo Wondershare, eegno hage la talaabooyin aad u fudud in aannu ku qoran aad u hoos ku xusan.
1) Sida loo soo dejisan (record) ka Spotify via TunesGo
Riix halkan si aad kala soo bixi TunesGo ka Wondershare ka dibna u soo dajiyo on your computer. Marka lagu rakibay, oo furan ama aan bilowno codsiga.
Hadda, eegno column ee fursadaha sida lagu sheegay dhinaca bidix ee shaashadda ku Wondershare TunesGo, waxaad arki doontaa in ay jirto button ah oo lagu magacaabo 'taariikhqorihii' waxaa. Waa in aad awood u heli qaybta 'Baro' ahaan. Marka aad u helay, jaraa'id ku yaal.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad riix qaybta ah 'oo taariikhqorihii', waa in aad u arki karto sawirka disc la badhanka loo yaqaan 'REC ee midabka cas; button marka u riixriixan oo ka bilaabmaya ee duubo. Haddii aad si guji badhanka tan, waxaad arki lahayd in taariikhqorihii ahaa bilaabayaa tirinta ah 00:00:00.
Guuritaanka on, hadda waa wakhtigii aad u bilowdo Spotify. Ogaaw in aad xor si ay u helaan Spotify via app ama web, sida aad jeceshahay tan iyo markii labada hab shaqayn lahaa si fiican u kiiskan. Sida ugu dhakhsaha badan Spotify si buuxda loo bilaabay, raadi song in aad rabto in aad ka soo dejisan iyo bilowdo u ciyaaro si aad haatan u diiwaan karo.
Marka ay song bilaabo inuu ciyaaro Spotify, waxaad awoodi doonaan in ay arkaan in taariikhqorihii on Wondershare TunesGo ayaa sidoo kale bilaabay diiwaan song in la ciyaaray. Ayaa saacad in aan mar hore ka wada hadleen ayaa tilmaamaya lahaa sida ay u bilaabi lahayd socda.
Hadda, waayo, tallaabada ugu dambeysa, waxaad u leedahay in lagu wareejiyo music aad diiwaan ilaa iyo haatan iyadoo la kaashanayo Wondershare TunesGo (isticmaalaya tallaabooyinka sida kor ku siiyo) in qalab mobile aad door bidayso. Tallaabooyinka ku lug habkan waa mid fudud oo waa sida soo socota.
• Si aad u ogaato faylasha muusig, u tag qaybta Maktabadda> diiwaan qaybta Dhinaca bidix ee codsiga.
• Hadda, xirmaan qalab mobile la your computer, iyadoo la isticmaalayo cable USB la siiyaa qalab aad ka.
• Waa in aad hadda xaq u riix qaybta lagu duubay iyo dooranayaan ee 'dhoofinta Si' ka dibna dooro qalabka sida si fiican.
• Waxaad awoodi kartaa heeso sidoo kale iibsiga mid mid ama calamey oo dhan ku wada (sax checkboxes soo socda la siiyaa track kasta).
2) Transfer music in PC
Riix 'Music Transfer' ah doorasho, calaamadee heeso ama playlists aad jeclaan lahayd inay u dhoofiyaan si aad PC oo taga si dhoofinta> dhoofinta in PC.
3) Transfer music in Lugood
Dooro songs Spotify aad rabto in laga keeno Lugood iyo markaas ka hoose ee Maktabadda, riix badhanka oranaya "Add to Lugood '. Waa in aad arki karin heesaha oo hadda ku daray in ay Lugood noqon.
4) music Transfer qalabka mobile sida iPhone / iPad / iPod
Riix 'Music Transfer' ka dib markii isku xira qalab aad.
Hadda, guji Import fursad u dooro Import ka Lugood.
Dooro gabayadii / playlists aad rabto in lagu wareejiyo si ay u qalab aad iyo weeraray OK.
5) Transfer music qalabka Android
Mar kale, guji "Music Transfer 'ka dib markii ay isku xira qalab Android aad.
Dooro Import doorasho ka dibna dajiyaan ka Lugood.
Dooro gabayadii / playlists aad rabto in lagu wareejiyo si ay u qalab Android iyo weeraray OK.
> Resource > Spotify > Sida lagu Helo Spotify Premium Free?